Tatoazy foko: inona izy ireo, karazana taoazy misy ary hevitra | Famoronana an-tserasera
Iray amin'ireo tatoazy izay tsy miala amin'ny lamaody, ary manana mpankafy maro dia maro, tombokavatsa foko ireo. Ireo dia tsy misy miralenta, izany hoe, azon'ny lahy sy ny vavy ampiasaina.
Taloha, izy ireo dia nampiasaina hanavahana ireo foko isan-karazany nonina ny Tany, fa ankehitriny izy ireo dia mbola amina singa haingon-trano maro izay itafiany amin'ny hodiny. Raha mieritreritra ny hahazo tatoazy foko ianao dia tonga amin'ny toerana tsara, satria tsy hanome anao hevitra momba ny tatoazy fotsiny izahay, fa tianay ho fantatrao koa hoe avy aiza izy ireo ary ny dikany mety hananany arakaraka ny karazany misafidy ianao.
1 Tantaran'ny tatoazy foko
2 Ny dikan'ny tatoazy foko
2.1 Tatoazy nentim-paharazana
2.1.1 Tatoazy foko misy foko Maori
2.1.2 Tatoazy Haida
2.1.3 Tattoandro Dayak
2.1.4 Tatoazy polinezianina
2.1.5 Tatoazy Celtic taloha
2.2 Tatoazy maoderina
3 Ohatra amin'ny tombokavatsa
Tantaran'ny tatoazy foko
Araka ny fantatrao, ny tombokavatsa ny tenany dia tsy zava-baovao. Efa ela no niaraka taminay izy ireo, saingy nanomboka ny fiandohan'ny fiainan'olombelona teto amin'izao tontolo izao dia nisy izy ireo, na dia fanaon'izy ireo mahazatra aza dia nataon'izy ireo "tsy dia maharitra" loatra, mampiasa ra na zavatra hafa handravahana ny hodiny.
ny Ny firafitry ny foko dia nanomboka niseho tamin'ny foko taloha. Raha ny tena izy dia fantatra fa ny firesahana voalohany momba azy ireo dia azo avy amin'ny foko Celtic, Borneo, ny Maori, Polynesia ... ity farany aza mbola zava-dehibe kokoa satria mety tsy fantatrao ilay izy, fa, ny teny hoe tatoazy, na tatoazy dia tonga avy amin'ny teny polineziana "tatau", ary io ilay lazain'izy ireo hoe "marika" na "voa".
Ny tanjon'ny olona nanisy marika ny hodiny dia ny tsy hankafy na handravaka ny vatany, raha ny tena izy dia nanana tanjona ireo tombokavatsa ireo, toy ny famantarana ireo mpikambana amin'ny foko iray na iray hafa. Ho fanampin'izay, araka ny karazana tatoazy foko, ireo dia mety hamaritra ny toerana ara-tsosialy iray, na ny zava-bitan'ireo olona ireo. Misy ifandraisany amin'ny fiarovana ihany koa, na ny fifangaroana amin'ny tontolo iainana rehefa mihaza, na noho ny finoanoam-poana, izay nahatonga an'izay rehetra nanao io marika io hahatsapa ho voaro.
Amin'izao fotoana izao, Niova ny tombokavatsa foko, ary afaka mahita vondrona lehibe roa ianao: ny tombokavatsa foko "tany am-boalohany" sy ankehitriny. Fa maninona no tsy mitovy? Ampy, fa miresaka bebe kokoa momba azy ireo eto ambany isika.
Ny dikan'ny tatoazy foko
Araka ny efa hitanao, ny tombokavatsa misy foko dia tsy zavatra moderina, fa efa an'arivony taona maro izy ireo ary, ireo nentin-drazana ireo, dia nisy dikany izay very ankehitriny. Na izany aza, hiezaka ny hanazava kely izahay.
Hanombohana, ary araka ny efa nolazainay teo aloha, misy vondrona lehibe roa ao amin'ny tatoazy foko: ny nentin-drazana sy ny maoderina. Ny marina dia ny iray sy ny iray hafa dia mitovy amin'ny rano sy menaka; na toy ny alina sy andro. Raha ny fahitana azy dia mety tianao kokoa ny maoderina, saingy tsy misy dikany lehibe toy ny an'ny hafa ireo. Te hahafantatra azy roa ve ianao? Andao isika hanatona azy.
Ny tatoazom-poko nentim-paharazana dia iray amin'ireo fampiasa isan-karazany misy. Raha ny tena izy, ny lamina dia manana fomba tsy manam-petra hanarahana, tsy manaraka ny zava-misy fa nifamatotra, na hoe tsy maintsy manaraka baiko. Ary ny zavatra dia ho an'ireo izay nampiasa azy taloha, na "tsara" na "chord" dia tsy olana; ho azy ireo dia nampifandraisina tamin'ny karazana foko iray na iray hafa, ho famantarana famantarana.
Tatoazy foko misy foko Maori
Araka ny efa nomarihinay, ireo foko ireo no andinin-tsoratra masina voalohany momba ny tatoazin'ny foko. Niseho tany Nouvelle-Zélande izy ireo ary niavaka tamin'ny fanaovana tombokavatsa ny tarehy, tànany ary tongony. Ohatra, amin'ny tranga tarehy, nantsoin'izy ireo hoe "moko", ary samy nanana sary tsy manam-paharoa ny tsirairay, izay misy ifandraisany amin'ny satan'izy ireo ara-tsosialy sy ny asany, ny zava-bitan'ny tenany manokana, sns. Raha ny vehivavy, ny tatoazy ireo dia tsy natao afa-tsy amin'ny vava sy saokany (amin'ny lehilahy dia mahasarona ny tarehy manontolo).
Ny foko Haida dia avy any Amerika, ary izy ireo dia fantatra amin'ny tombokavatsa izay anaovany indrindra amin'ny sandry, tratra, soroka ary lamosina. Karazan-tombokavatsa inona izy ireo? Miorina tsara amin'ny biby. Raha ny marina dia ny orsa, ombivavy, trondro sns no tena hita.
Dayak dia ao amin'ny nosy Borneo, any Azia. Amin'ity tranga ity, ny tombokavatsa, izay ampiasain'ny lehilahy sy ny vehivavy, dia mba hiarovana ny olona mitafy azy ireo. Noho izany, volavola, dragona, alika ... Ary, tsy toy ny teo aloha, teto izy ireo dia nampiasa loko (tsy matetika fa imbetsaka).
Amin'ny tranga Polinezia, ny tombokavatsa dia mampiavaka ny mponin'ny nosy, izay feno izy ireo: sandry, tongotra, tratra, soroka ... Ho azy ireo dia fomba iray hanehoana ny tantarany manokana, ary lazao hoe iza izy ireo, fianakaviana iza izy ireo, ny toerana misy azy, ny finoany, ny zava-bitany ...
Tatoazy Celtic taloha
Hofaranantsika amin'ny tatoazy foko Celtic. Amin'ireny dia fantatra fa nipetraka tany Irlandy, France ary Angletera izy ireo ary nanjavona tamin'ny taona 1000. Na izany aza, mijanona ihany ny tombokavatany.
Ary nanao ahoana izy ireo? Eny, miresaka momba ny tatoazy misy endrika biby isika, indrindra ny vorona, alika, na olombelona mihitsy aza. Ireo dia mifampitohy, ankoatry ny endrika miolikolika.
Andao hiresaka momba ny maoderina. Nantsoina hoe "ny foko vaovao" izy ireo ary ny tena marina dia tsy dia misy ifandraisany amin'ireo taloha izay efa noresahintsika. Amin'ity tranga ity, ny zava-dehibe dia tsy ny fiasa nananan'ny tatoazy hafa, fa ny hatsarana. Namboarina tamin'ny fomba iray na hafa fotsiny izy ireo mba hahamendrika azy io, fa tsy misy hafa.
Marina izany manandrana mampanakaiky ireo foko taloha ny endrika, saingy tsy mitarika hahatratra azy io, satria haingo kokoa izy ireo ary misy sary na endrika maoderina aza, izay tamin'ny andro taloha, tsy nijanona nieritreritra na nanao izany. Ataovy ao an-tsaina fa ny razana dia nampiasa fitaovana tsy hita popoka, toy ny fanjaitra poakaty izay namboarin'izy ireo avy amin'ny tsapatsokin'ny biby, taolana, volotsangana ... izay nofenoany ranomainty mainty ary nanamarika ny vatan'ilay olon-kafa.
Ankehitriny, ny tatoazin'ny foko dia mety misy loko ihany koa, indrindra ny mena na ny mavo. Ho fanampin'izany, izy ireo dia mifototra amin'ny tsipika matevina voahandro miaraka amin'ireo tsara kokoa, na antsipirihany izay tsy afaka jerena amin'ny tombokavatsa tany am-boalohany.
Na izany aza, tsy midika izany fa tsy tsara tarehy izy ireo, ary, amin'ny tenany, dia afaka manana dikany ho an'ilay olona mitafy azy izy ireo.
Ohatra amin'ny tombokavatsa
Ary farany, ary ahoana no ahafantaranay izay tianao ho hitan'ny olona hevitra tatoazin'ny foko, izahay dia nanao fanangonana sary izay anehoana ireo. Samy manana ny fomban-drazana sy ny maoderina indrindra ianao. Na ianao misafidy karazana iray na iray hafa dia miankina aminao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Tatoazy foko
Mandraisa anjara amin'ny Adobe sy Pixar Animation Studios Creative Challenge ho an'ny horonantsary Soul manaraka